बिहानै उठ्ने बित्तिकै मोबाइल हेर्नाले बढाउँछ यी रोगहरू – Krazy NepaL
बिहानै उठ्ने बित्तिकै मोबाइल हेर्नाले बढाउँछ यी रोगहरू
May 10, 2021 508
अहिलेको समयमा कोही पनि मोबाइल बिना बस्न नसक्ने भइसकेका छन् । मोबाइलले धेरै कुरामा सजिलो बनाए पनि यसको लत पनि बस्दै गएको छ । अहिले मानिसहरूले फोन यति धेरै प्रयोग गर्छन् कि राति अबेरसम्म मोबाइल चलाउने र बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि मोबाइल चलाउनु नै पहिलो काम भएको छ । बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइलको उपयोग स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हानिकारक छ । आईटी इञ्जिनियर सयुज आचार्यले बिहान उठ्ने बितिक्कै मोबाइल प्रयोग गर्दा हुने रोग र अन्य खतराहरूकाबारे केही सुझाव दिएका छन् ।
आँखा र दिमागमा असर– मोबाइलबाट निस्किने किरणलाई लामो समय हेर्दा आँखाको दृश्यशक्तिलाई कमजोर पार्दै लान्छ । मोबाइलको किरण प्रत्यक्ष्य रूपमा आँखामा पर्ने हुनाले यसको असर टिभीको स्क्रिनको तुलनामा अझै कडा हुन्छ । ज्यादा मोबाइल प्रयोग गर्नाले आँखा र टाउको दुख्ने, गर्दन दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या निम्तिन सक्छन् । जुन यसले दिमागमा पार्ने असरको कारण बन्न सक्छ ।
डिप्रे सनको डर- सुत्ने समयमा मोबाइल हेर्नु र उठ्ने बित्तिकै मोबाइल नै प्रयोग गर्दा अवस्था झन खराब हुनसक्छ । यसरी नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने मानिसहरू डिप्रेसनबाट ग्रस्त हुन सक्छन् । बिहान उठ्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न किसिमका समाचारहरू पढेर र हेरेर मानिस दिक्दारीमा फस्छ । अरूको जीवनशैली देखेर तिनीहरू निराश हुन्छन् र आफैंलाई तुलना गर्न थाल्छन् जसले प्रयोगकर्तामा डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ ।
तनाव र चिन्ता– चिन्ता विना शान्तिपूर्वक आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्नु उत्तम हुन्छ । यदि तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइललाई आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ भने फोनकल, म्यासेज, इमेल, रिमाइन्डर, सोसल मिडिया इत्यादिले भरिएको हुन्छ जसले चि न्ता र तना व निम्त्याउन सक्छ । यदि तपाईं निद्राबाट ब्युँझ्ने बित्तिकै सोसल मिडिया हेर्न सुरु गर्नुभयो भने, दिमाग यसमा गाँसिएको हुन्छ र अनावश्यक जानकारीले भरिन्छ । त नाव र चि न्ताको साथ दिनको सुरुवात स्वास्थ्यको लागि हा निकारक मानिन्छ ।
चिडचिडापन बढ्नु– यदि तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल फोन हेर्ने गर्नुभयो भने, तपाईंले नचाहँदा नचाहँदै पनि चिढचिढापन आइ नै हाल्छ । बिहानको तालिकाको सुरुवात मोबाइलमा प्राकृतिक रूपमा आफसेआफ परिवर्तन हुनसक्छ ।
यसको कारण यो हो बिहान उठेपछि मोबाइलमा केही त्यस्ता प्रकृतिका समाचार, फोटो, कार्टुन, चित्र देख्नुभयो जुन नकारात्मक छ, यसले सीधा मस्तिष्कलाई असर गर्छ । रिस उठ्ने, तनाव हुने, अनियन्त्रित हुने लगायतका कुरा यसको कारणले पैदा हुनसक्छ ।
कार्यक्षमतामा प्रभाव– बिहान सबभन्दा पहिले मोबाइल हेर्दा नकारात्मक सूचना देखेपछि दिमागले उही विषयको बारेमा सोच्न थाल्छ । यसले अन्य कामलाई ध्यानमा राख्दैन र सिधै कार्यक्षमतामा असर पुर्‍याउँछ ।
नियमित रूपमा बिहान के गर्ने ?
– यदि कुनै जरुरी काम छैन भने बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल हेर्नुको सट्टा यसलाई चार्जमा राखी बिहानलाई अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरूमा व्यस्त बनाउने । बिहानको व्यवहारले व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ । मुड सुधार्न र सम्पूर्ण शरीरलाई शान्त राख्नका लागि हाम्रो मेटाबोलिजम सही राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
– बिहान उठेपछि, खाली पेटमा एक गिलास मनतातो पानीमा कागतीको रस मिसाएर पिउँदा पाचन प्रणालीलाई सफा राख्छ र प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ । कागतीमा रहेका तत्वहरूले मेटाबोलिजम बढाउन मद्दत गर्छ ।
– दिनचर्यालाई तालिका बनाएर ढाल्नुहोस् । योग, एरोबिक्स, तौल भार उठाउने वा राम्रो व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुस् ।
– ध्यानले दिमागलाई शान्त राख्छ त्यसैले यसलाई नियमित गर्नुहोस् ।
– परिवारसँग बसेर ग्रिन टीको चुस्कीसँगै अखबार पढेर बिहान बिताउनुहोस् ।
– बिहानको नियमित तालिका पछि मात्र मोबाइल हेर्ने बानी गर्नु राम्रो हुन्छ ।
यो पोस्ट जानकारीको लागि भएकोले सबैले एक शेयर गर्नुहोला।
Prevमनमा बस्ने यी ३ युवतीहरुलाई सलमानले दिएका थिए करोडौं पर्ने कार ! [मूल्य सहित]
Nextअस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस्
धनी हुने व्यक्तिको हातमा हुन्छ यस्तो रेखा, तपाईकोमा पनि छ की ?
सरकारले बञ्चरे डाँडाँ ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
भाग्यमानि व्यक्तिका हातमा मात्रै हुन्छन् यस्ता औँला, तपाईको पनि छ की ?
यस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघर क्यान्सरको उच्च जोखिम, यी संकेतलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता